Madagasikara : maniry hanorina fandriampahalemana ireo tanora - Book News Madagascar
Publié septembre 14, 2017 par Book News
Last updated on novembre 2, 2017
Nitsangana ny Madagascar Peacebuilders
Ho avy sady ankehitrinin’ny firenena ny tanora. © BookNews
62%-n’ny malagasy dia tanora avokoa. Ireo tanora ireo dia mety ho fiavian’ny tsy fandriampahalemana, fa mety ihany koa hitonfra fandriampahalemana. Misy ireo tanora nofanin’ny Search For Common Ground izay maniry ny hanorina fandriampahalemana eto amin’ny tany sy ny firenena. “Peacebuilders” no voambolana teknika afaka iantsoana an’ireo tanora ireo. Nitsangana androany amin’ny Facebook ny pejy “Madagascar Peacebuilders”. Tanora 34 no nanapa-kevitra hanangana an’ity vondrona ity, izay nofanin’ny SFCG. Manodidina ny 20 hatramin’ny 35 taona izy ireo. Notsongaina avy tamin’ny fiarahamonina, ny fikambanana tsy miankina amin’ny fanjakana sy fikambanana politika, miparitaka amin’ny lafivalon’ny Nosy, ire tanora ireo. Araka ny fantatra, hiverina any amin’ireo toerana misy azy ireo avy izy ireo rehefa avy nanatrika fiofanana nandritra ny telo andro, nomen’ny SFCG, momban’ny fanorenana fandriampahalemana. Hampita ny traikefan’izy ireo amin’ireo fikambanana sy toerana iasany avy izy ireo. “Tsy mbola miatrika olana toy ny ady sy vono olona toy ny any amin’ny tany hafa i Madagasikara, fa aleo misoroka toy izay mitsabo”, hoy ny SFCG ny volana aprily lasa teo, raha nanomboka ireo fiofanana. Nahaso traikefa momba ny fitaritana olona na “leadership” ihany koa ireo tanora ireo.
Mangetaheta fiovana ny tanora
Notanterahina omaly ny Samy Gasy Live, teny amin’ny sekoly Sainte Famille Mahamasina © BookNews
Na dia misy aza ny “fuite de cerveaux” an’ireo tanora aman’arivony sy ny tsy firarahian’ny ankabeazan’ny olona ny fiainana ara-politikan’ny firenena amin’izao, dia misy kosa ireo tanora malagasy no maniry ny mba hitondra fiovana sy mba te hanao zavatra eto amin’ny firenena. Misy amin’ireo tanora ohatra no nanapa-kevitra ny hanangana tetikasa ho fanovana ny rafitra misy eo amin’ny tontolon’ny fanaovan-gazety, indrindra eto amin’ity resaka “felaka”(1) ity. Misy ihany koa ireo tanora izay nanangana tetikasa hamongorana ny “tsenan’ny ampela” ao Toliara. “Peace” no anaran’ity tetikasa farany ity. Ity tetikasa farany ity no voafidy ho tetikasa tsara indrindra omaly, nandritra ny fandaharana Samy Gasy Live, omaly, tao amin’ny sekoly Sainte Famille Mahamasina. Ny tanora no andrin’ny ho avin’ny firenena, ny fandrosoana sy ny fitandrovana ny fandriampahalemana eto Madagasikara. Izy ireo no fototry ny filaminana eto amin’ity firenena izay rotiky ny dahalo, ny kolikoly, ny tsy fananan’asa sy ny olana ara-politika ity.
Fanampian’ny Search For Common ground
Ireo “Peacebuilders” nofanin’ny Search For Common Ground dia nofantenana avy amin’ny fiantsoana nataon’izy ireo. Nisy arak’izany ireo tanora aman-jatony nandefa ny taratasin’izy ireo ka ireo “leaders potentiels” no noraisin’ny SFCG. Fiofanana roa sosona no nomen’ny SFCG nanomboka ny volana aprily lasa teo. Ny fiofanana mitohy izay andraisana tanora telopolo eo ho eo anjara ary mahakasika ny famahana olana sy ady, fitazomana ny fandriampahalemana, sy ny fitaritana olona. Ny fiofanana manokana kosa dia isaky ny roa ka hatramin’ny dimy volana miantoana eo ary inefatra ao anatin’ny taona. Mandritra ireo fiofanana, ampianarina ny fomba famahana olana amin’ny alalan’ny “Approche Common Ground” izay mikatsaka ny tombontsoa iombonana, ny mpiofana. Tafiditra amin’ilay tetikasa Samy Gasy, izay fiarahamiasan’ny SFCG sy ny masoivoho amerikanina moa, ireo fampiofanana ireo.
(1)felaka: vola fanome ireo mpanao gazety avy amin’ireo olona te hanao izany, rehefa te hamoaka vaovao na misy zavatra mba tiany avoaka
Publié dans Actualités, Jeunesse, Malagasy et Social